Liiska baarlamaanka cusub ee Puntland oo la sii daayay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandLiiska baarlamaanka cusub ee Puntland oo la sii daayay
December 31, 2018 Puntland Mirror Puntland, Puntland Election, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sii daayay liiska cusub ee baarlamaanka Puntland.
In ka badan 40 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka ayaa ah kuwo cusub, oo intooda badan yihiin dhalinyaro, marka loo fiirsho liiska la sii daayay.
Hal xubin ayaa ka ah haween baarlamaanka.
Xubnaha cusub ee baarlamaanka ayaa dooran doona guddoomiye iyo madaxweynaha xiga horaanta bisha Janaayo, sida jadwalku yahay.
Kani waa baarlamaankii shanaad ee Puntland oo ay soo doortaan hoggaamiye beeleedku tan iyo markii la asaasay sanadkii 1998.
Waa kan liisku:
January 8, 2019 Baarlamaanka Puntland oo doortay madaxweyne cusub